Horyaalka Talyaaniga oo todobaadkan xiise gaar ah leh! (Sabab?!) – Gool FM
Horyaalka Talyaaniga oo todobaadkan xiise gaar ah leh! (Sabab?!)
(Roma) 01 Maarso 2018 – Waxaa todobaad dhamaadkan dhacaya kulamadii ugu xiisaha badnaa horyaalka Talyaaniga dufcaddiisa 2017-18, gaar todobaadka 27-aad oo lakala dheelayo 3-da ilaa 4-ta bishan Maarso.
Haddaba, waxa todobaadkan horyaalka oo awalba meel xasaasi ah marayay xiise gaar ah u yeelaya ayaa waxa tahay iyadoo ay kulamo iyaga uun ka dhexeeya ay yeelanayaan 6-da kooxood ee horyaalka ugu sarreeya.
Tusaale ahaan, Lazio waxay wajahaysaa Juventus, Napoli waxay is arkayaan AS Roma, halka AC Milan ay Derby della Madonnina kula ballansan tahay kooxda Inter Milan, iyadoo maaddaama ay kooxaha sare is wajahayaan ay taasi saamayn ku yeelan doonto taxa kala sarreeynta, iyadoo ay kooxaha qaar rajo cusubi soo geli karto sida Milan oo aan bil kahor xisaabtaba ku jirin.
Hoos ka eeg jadwalka oo idil….